China α-Naphthylacetic Acid (NAA) orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Lemandou
CAS No. 86-87-3 Milanja molekiola 186,21
molekiolan'ny C12H10O2 Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy
fahadiovana 99,0% min. Teboka mitsonika 130-134 ºC
Raha ampiasaina ho famporisihana ny fitomboan'ny zavamaniry amin'ny fambolena, ny asidra 1-Naphthylacetic dia manana ny toetra sy ny fiasa ara-batana an'ny auxin IAA endogenous. Mampiroborobo ny metabolisma sy ny fotosintesisan'ny voly, toy ny fampiroboroboana ny fizarana sela sy ny fanitarana, ny fampiorenana ny faka tsy miovaova, ny fampitomboana ny fametrahana voankazo, ny fisorohana ny filatsahan'ny voankazo, ary ny fanovana ny tahan'ny voninkazo lahy sy vavy, sns. ny manakana ny fitomboana. Ny zana-ketsa ary ny voam-bary ao anaty vahaolana NAA dia afaka mampitombo ny vokatra. Izy io koa dia afaka misoroka ny filatsahan'ny hazo fihinam-boa sy ny landihazo, mampiroborobo ny fambolena zava-maniry sy mamony, mampitombo ny tahan'ny fitsimohany ary mahatonga ny vokatra ho matotra sy mamokatra. Misoroka ny fianjeran'ny voninkazo sy ny voankazo ary mampiroborobo ny voankazo tsy misy voa.
Rehefa ampiasaina amin'ny fisorohana ny fianjeran'ny voankazo dia tsy tokony ho avo loatra ny fifantohana, raha tsy izany dia hisy vokany mifanohitra amin'izany, satria ny fihenan'ny asidra 1-naphthylacetic ambony dia mety hampiroborobo ny famokarana etilena amin'ny zavamaniry;
Rehefa ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny fakany zavamaniry, dia tsara kokoa ny mitambatra amin'ny IAA na mpandraharaha mpampiroborobo faka, raha mampiasa asidra 1-naphthylacetic fotsiny dia tsara ny vokatra miorim-paka, fa ny fitomboan'ny zana-kazo dia tsy mety. Rehefa famafazana meloka sy voankazo dia tsara ny mamafy amin'ny lafin-javatra amin'ny ravina.
Manaraka: 3-Indoleacetic Acid (IAA)